हाउस वाइफका लागि ६ बिजनेस अाइडिया « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
हाउस वाइफका लागि ६ बिजनेस अाइडिया
१० श्रावण २०७४, मंगलवार ०२:४९
अाजकल धेरै अनलाइन लेखनका बारेमा धेरै अवसरहरु अाएका हुन्छन। अहिलेको विश्व प्रविधीका कारण निकै साघुर बन्दै गएको छ । विदेशमा रहेका केही अनलाइन न्यूज पोर्टल र नेपालमा पनि केहीले अनलाइन राइटरको खोजी गर्न थालेका छन । वेबसाइटको लागि कन्टेन,रिसर्चको लागि राइटर र बुक लेख्नको लागि लागि लेखक अादी काममा तपाईको रुची भए इन्टरनेटको सहयोगको माध्यमबाट घरमा बसेर नै राइटिङ्गको काम गर्न सक्नु हुन्छ । यसमा तपाइले कुनै पनि भाषामा तपाइले अाफ्नो कला पस्कन सक्नु हुन्छ ।
तपाइ सिलाइ बुनाइको तालिम लिनु भएको छ र यसमा तपाइको रुची छ भने सहज हिसाबले बिजनेस सुरु गर्न सक्नु हुन्छ । यसका लागि तपाईले अाफुलाई अावश्यकता अनुसार कार्मचारी राखेर पनि यो व्यवसाय गर्न सक्नु हुन्छ । साथै यो बिजनेसलाई अलग हिसाबले अगाडी बढाउन चहानु हुन्छ भने गार्मेन्ट र कपडा कम्पनीसंग टाइअप समेत गर्न सक्नु हुन्छ ।
तपाईलाई नाच्ने शाैख छ ? र तालिम समेत लिइसक्नु भएको छ भने घरमा नै डान्स ट्रेडिङ्ग कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नु हुन्छ । अाजभोली हरेक मान्छे नाच सिक्ने चहाना राख्छ । खास गरि बच्चाको लागि नाच धेरैनै जरुरी हुन्छ । तपाइको घरमा सुहाउदो स्थान छ भने यो कक्षा सुरुवात गरिहाल्दा राम्रो हुन्छ । सानो सानो तरिकाले सञ्चालन गर्न सके भविष्यमा यसको विस्तार व्यापक बन्छ ।
अाजभोली जो कोही फेसन कन्सनस छन बिशेष गरि महिला । तपाईको रुची मेकअप र हेयर कटमा छ भने अाफ्नो घर वा घर पायक पर्ने स्थानमा नै यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नु हुन्छ । यस क्षेत्रमा भएक ज्ञानको बारेमा तालिम दिएर पनि व्युटी शैलुनबाट राम्रो अाम्दानी गर्न सक्नु हुन्छ ।
तपाई खाना वनाउन शैखिन हुनु हुन्छ ? वा अलग अलग डिशमा तपाईले स्वादको जादु दिन सक्ने र लोभ्याउने क्षमता भए टिफिन सेन्टर या रेष्टुरेन्ट खोल्न सक्नु हुन्छ । यसमा शुरुअात भने एकलै गर्नुस । अाखिर तपाईलाई जरुरी भए कामदार पनि राख्नुस त्यसमा तपाईलाई पुर्ण सहयोग होस ।
यदि तपाइ पढ्ने र पढाउनेमा रुची राख्नु हुन्छ भने घरमा नै बसेर विधार्थीहरुलाई ट्यूशन पढाउन सक्नु हुन्छ । ट्यूशन कुनै पनि बिषयमा दिन सकिन्छ । तर त्यसमा तपाईको क्षमता हुन जरुरी छ । अहिले धेरैका अविभावकहरु बच्चालाई समय दिन नसक्दा ट्यूशन पढाउन खोजि गरिरहेका हुन्छन । यसलाई तपाईले सहि तरिकाले क्यास गर्न सके केही समय दिएर अाम्दानी गर्न सक्नु हुन्छ ।
प्रकाशित : १० श्रावण २०७४, मंगलवार ०२:४९